पार्टी सभापति हुँ भन्दैमा धम्की दिने ? डराउने कुरै छैन : रामचन्द्र | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more पार्टी सभापति हुँ भन्दैमा धम्की दिने ? डराउने कुरै छैन : रामचन्द्र
माघ ६ गते, २०७४ - ०६:४०
काठमाडौँ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टी सञ्चालन कार्यशैलीलाई लिएर पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति समिति बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् ।
माघ ६ गते, २०७४ - ०६:४० मा प्रकाशित